Lip For Being Alive - ikigai
Lip For Being Alive
Matte Lipstick ဆိုတာက နှုတ်ခမ်းသား?အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နူတ်ခမ်းနီအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ matte lipstickတော်တော်များများက တာရှည်ခံ ပြီး ဆိုးလိုက်ရင် နှုတ်ခမ်းသားကို? ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
ခီခီ Lip for Being Alive လေးက Velvet Matte Type လေးဖြစ်ပြီး Creamy Texture လေးဖြစ်တာကြောင့် ဆိုးလိုက်ရင် အခြား Matte Type တွေလို ခြောက်ခြောက်ကြီးဖြစ်မသွားပဲ✨နှုတ်ခမ်းပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ အိအိလေး ဖြစ်ပြီးတစ်နေကုန်ခံပါတယ်?
?ခီခီရဲ့? Lip For Being Alive? လေးကို Online မှာပွတ်လောရိုက်အောင်ကြိုက်နေတဲ့ Customer တွေရဲ့ စကားသံများ ❓
– ပေါ့ပါးပြီး ဆိုးထားမှန်းမသိအောင် အရမ်းပေါ့ပါးတယ်☘️
– ဘာစားစားမပျက်ပဲ တစ်နေကုန်ခံတယ် နော်???
– mask တပ်ပြီး ချွတ်လိုက်ရင် နှုတ်ခမ်းနီက mask ကိုမပေဘူး အဲ့ဒါကြောင့် နောက် တစ်ရောင်ထပ်ဝယ်လိုက်တယ်?
– အရောင်ထွက်မှန်လို့ အရမ်းကြိုက်❤️
ခီခီရဲ့ Lip လေးက Customer တွေအသဲစွဲတာလဲ မပြောနဲ့လေ….
?ခီခီ ?Lip For Being Alive? ရဲ့ တစ်ခြားနှုတ်ခမ်းနီတွေနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက် တွေကတော့
-Tinted Effect ပါ၀င်တယ်။??ခီခီနှုတ်ခမ်းနီလေးက? တစ်ခါဆိုးပီး အနည်းဆုံး (၅ ) နာရီကနေ (၈)နာရီထိ Tinted Effect ကျန်ပါတယ် ⏰?
-အွန်လိုင်းမှာ 10 Million Pieces ထိဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာရောင်းချထားတဲ့ Top Online Best Seller ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
?ခီခီ? Lip For Being Alive? ရဲ့?Main Ingredients? အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့…
– France မှ Organic Argan Oil☘️ က Antioxidant? များစွာပါဝင်လို့ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို နူးညံ့အိစက်စေပါတယ်။ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့်? နှုတ်ခမ်းသားတွေ မည်းလာတာမျိုး မဖြစ်အောင်ကာကွယ် တားဆီးပေးပါတယ်⚡️
– Vitamin-E ပါဝင်လို့ နှုတ်ခမ်းသား? အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုကာကွယ်ပေးပြီး နေရောင်ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်ပျော့ပျောင်းနူးညံ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးရအောင် ပေါင်းတင်ပေးပါတယ် ✨☘️
?ခီခီ ရဲ့ Lip For Being Alive? လေးရဲ့ Colors များ…..
ခီခီ ရဲ့ Lip Color (10) Colors? ရှိပါတယ်
01-Vocation (တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ အသွင်အပြင်အတွက်)?
02-Profession (ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ တစ်နေ့တာအတွက်)?
03-Family (နွေးထွေးလှပစေတဲ့ သင့်ရဲ့ အပြုံးအတွက် )?
04-Friend (တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့ နေ့ရက်တွေအတွက် )?
07-Mission (စွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ အပြုံးတစ်စုံအတွက် )?
08- Inspiration (သစ်လွင်တောက်ပတဲ့ အတွေးအခေါ်အတွက်)?
09- Contribution (လေးနက်မှုတို့ရဲ့သင်္ကေတအတွက်)?
10-Desire (မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက် )? ဆိုပြီး ဖြူသူရောညိုသူတွေနဲ့ပါ လိုက်ဖက်အောင်(၁၀) Colors ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်
?ခီခီရဲ့ ? Lip For Being Alive? အသုံးပြု ပုံ✅
နှုတ်ခမ်းနီ? အရောင် ပိုထင်းပြီး ပိုလှချင်ရင်တော့ ?ခီခီရဲ့ Lip ? လေး မဆိုးခင် ခီခီရဲ့ Melt On Skin? နဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်ကိုပါးပါးလေး လိမ်းပေးပါ ၊ အဖြူ Base ပေါ်မှာဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းနီ အရောင် ပိုထင်းပြီး ပိုလှစေပါလိမ့်မယ်နော်
ခီခီရဲ့ Lip? ကို ပထမဆုံး တစ်လွှာမှာ မထူမပါးလေး အရင် ဆိုးပါမယ် ပြီးရင်⏰ စက္ကန့် (၃၀) လောက် အခြောက်ခံမယ်။
•နူးညံ့ လှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေး✨? ရဖို့ တစ်ပါတ် (၂) ခါ နှုတ်ခမ်းနှုတ်ခမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ? ဆဲလ်သေတွေ မရှိအောင် အဖတ်လန်တာတွေ မဖြစ်ရအောင် Exfoliate ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
(Scrub လုပ်ပြီးတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ? ပိုနေတဲ့ သကြားနဲ့ ဆီတွေကို တစ်သျှူးနဲ့ သုတ်ချလိုက်ပါ?) (သို့မဟုတ်)
•ဒါဆိုရင် နုပျိုလှပတဲ့✨ နှုတ်ခမ်းသားလေးမှာ? ခီခီ ရဲ့ Lip For Being Alive? လေးဆိုးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီ။
စျေးနှုန်းကလဲ 5ml ကို 6500ks ဆိုတော့ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ဆိုးလို့ရပြီနော်
KI KI Lip For Being Alive Color Choices